ह्याट्रिक हिरो मेस्सीको ह्याट्रिक र स्वरेजको गोलमा बार्सिलोना विजयी !! - Experience Best News from Nepal
ह्याट्रिक हिरो मेस्सीको ह्याट्रिक र स्वरेजको गोलमा बार्सिलोना विजयी !!
जारी ला फुटबल खेल अन्तर्गत बार्सिलोनाले रियल बेटिसलाई उसकै घरमा ४-१ ले बिजयी हासिल गरेको छ । बार्सिलोनाका अर्जेन्टाइन स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेसीले करिअरको ५१ औं ह्याट्रिक गोल पुरा गरेका छन् । मेसीको सोही ह्याट्रिकको मद्दतमा स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत आइतबार राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले रियल बेटिसविरुद्ध जित हात पारेको छ ।
रियल बेटिसको मैदानमा भएको खेलमा बार्सिलोनालाई सानदार जित दिलाउने क्रममा कप्तान लियोनल मेसीले १८, पहिलो इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेट र ८५ औं मिनेटमा गोल गर्दै करिअरको ५१ ह्याट्रिक पुरा गरे ।
यो ह्याट्रिकसँगै मेसीले क्रिस्टियानो रोनाल्डोको नाममा रहेको ला लिगामा सर्वाधिक ह्याट्रिक गर्ने कीर्तिमान पनि बराबरी गरेका छन् । दुवै समान ३४ ह्याट्रिक गरेका छन् ।
यस्तै करिअरको ह्याट्रिकमा भने मेसी रोनाल्डोभन्दा १ ले पछि छन् । रोनाल्डोको करिअरमा ५२ ह्याट्रिक गरेका छन् भने मेसीले ५१ ह्याट्रिक गरेका छन् ।
१८ औं मिनेटमा कप्तान मेसीले फ्रिकिकमा उत्कृष्ट गोल गर्दै बार्सिलोनालाई अग्रता दिलाए । यस्तै पहिलो हाफको इन्जुर समयको दोस्रो मिनेटमा गोल गर्दै मेसीले बार्सिलोनालाई २–० को अग्रता दिलाए ।
६३ औं मिनेटमा लुइस सुआरेजले काउन्टरमा उत्कृष्ट गोल गर्दै बार्सिलोनालाई ३–०को अग्रता दिलाए । खेलको ८२ औं मिनेटमा बेटिसका लोरेन मोरोनले गोल गर्दै अग्रता घटाउने प्रयास गरे पनि खेल सकिन ५ मिनेट बाँकी छँदा कप्तान मेसीले उत्कृष्ट गोल गरेपछि खेल बार्सिलोनाले सहज रुपमा आफ्नो पक्षमा पा¥यो ।
खेल भने रियल बेटिसको नियन्त्रणमा थियो । उसले बार्सिलोनाविरुद्ध ५७ प्रतिशत बल पोजेसन बनाएको थियो । तर, आक्रमण भने बार्सिलोनाले बढी गरेको थियो । उसले बेटिसको पोस्टमा १६ सट प्रहार गरेको थियो, जसमध्ये ९ सट फ्रेममा थियो । बेटिसले भने १३ सट प्रहार गरेकोमा ३ सट मात्र फ्रेममा थियो ।
बेटिसविरुद्धको जितसँगै बार्सिलोनाले शीर्ष स्थानमा १० अंकको अग्रता कायम गरेको छ । २८ खेलबाट बार्सिलानोको ६६ अंक भएको छ । दोस्रो स्थानका एट्लेटिको म्याड्रिडको ५६ अंक छ भने तेस्रो स्थानको रियल म्याड्रिडको ५४ अंकक छ ।
बार्सिलोना छोड्न यी स्टारलाई क्लबले दियो इजाजत, युनाइटेडले लिन गर्यो अस्विकार